Filannoo Biyyoolessaa: 'Bordiin Filannoo taphaan ala nu taasisuu barbaada' - BBC News Afaan Oromoo
Labsii filannoo baatiiwwan muraasaan dura mana maree bakka bu'oota uummataatiin raggaasifame ture. Keessattuu qondaaltonni siyaasaa gameeyyiin kan akka Pirofeesar Mararaa Guddinaa fi Pirofesar Bayyanaa Phexiroos keeyyatawwan labsiichaa muraasa irratti komii cimaa kaasaa turaniiru.
Labsichis paartileen galmaa'uuf mallattoo miseensoota kuma 10 walitti qabachuu qabaatu jechuun, keessattuu partii siyaasaa kan isaanii kana duras filannoo keessatti hirmaataniif kun haqa qabeessa miti jechuun mormaafi qeeqaa turaniiru.
Pirofeesar Mararaafi Bayyanaan waggoota darban keessatti dhimma kana aanga'oota ADWUI duraanii kan akka Obbo Mallas Zeenaawiifi Barakat Simoon fa'ii waliin mormuun jijjiirsifne, amma labsii kana keessatti hamatamuun ragaasiifamuusaa sirri miti jedhu.
Abdiifi sodaa paartileen siyaasaa filannoo dhufurratti qaban
Kanaan dura Pirofeesar Mararaan mallatoon miseensoota kuma 10 walitti qabuun baasii olaanaa gaafata yoo jedhan, Pirofeesar Bayyanaan ammoo osoo paartii kana duraa jiran ta'anii jiranuu akka haaraatti galmaa'aa jedhamuunsaanii haqa qabeessa miti, dhimmicha gara seeraatti geessuufu yaadaa jirra jechuun ibsuun saanii ni yaadatama.
Amma garuu filannoon gaggeefamuuf baatiiwwan afur qofaatu hafe. Kanaafuu adeemsi galmee paartiilee kanneen maaliirratti argama jechuun BBC'n gammeessoota siyaasaa kanneen dubbiseera.
Paartileen gara 70 ta'an labsii kanarratti mormiisaanii dhageessisanis, Boordiin Filannoo Biyyoolessaa garuu haaluma eegaleen gaggeessuu itti fufeera kan jedhan Pirofeesar Bayyanaan, torban darbee keessa boordichi guyyaa dhumaa kaa'uuf jennaan haalicha xumuruun akka dhiyaataniif akka isaan beeksiise ibsu.
Dhimmicha gara seeraatti geessuuf yaadanilleen, irratti mari'achuun dhimmichi hangam baasaa kan jedhu murteessuun yaadasaanii geeddaru dubbatu.
''Biyya boodatti hafaa keessatti motummaan wal himachuun eessanuu nama hingahu. Haaloon nurratti qabama. Sochii keenya itti aanuuf rakkina nutti uuma'' jechuun murtee isaanii ibsu.
''Boordiin Filannoo gocha raawwataa jiru irraa ka'uun, paartiilee duraanii xabaan ala taasisuuf fedhii qabu jechuun amannaa'' jedhu Pirofeesar Mararaan.
Labsicha cimsanii mormaniis, galmaa'uun isaanii dirqama waan ta'eef, dameewwan isaaniitti mallattoo miseensa isaanii walitti qabuuf qajeelfama kennuun sochii eegalusaanii Pirofeesar Bayyanaan ni dubbatu.
''Adaraa seeraa jennuus kan nu dhagahu dhabnee jirra,'' kan jedhan Pirofesar Bayyanaan, tarii akkuma barbaadametti ''humna dhabuun gara manasaaniitti deebii'an akkuma hinjedhamineef'' waan danda'ameef hunda akka raawwatan dubbatu.
'Abiy ADWUI hogganuu dandeenyaan seenaa dalaguu danda'a'
Paartileen siyaasaa 70 nyaataa lagannee mormiisaanii ibsachuuf. Maaliif laata?
"Akkan tilmaamuutti baatii lama keessatti xumuraa galchaa jechuunsaanii hinolu. Haala ammala amma boordiin filannoo agarsiisaa jiruutti guyyaa 15 keessattuu xumuraa jechuu danda'u ta'a,'' jechuun tilmaamasaanii ibsu.
Gama biraatiin ammoo Pirofesar Mararaan dirqamuun haaluma labsiin falannoo jedhuutti galmaa'uuf sochii taasisuuf eegalusaanii dubbatu.
"Osoo hinjaalatiin dirqamaan haala kana keessa gallee jirra. Mormii keenya garuu itti fufna'' kan jedhan Pirofesar Mararaan, filannoo gaggeessuuf baatii afur qofa hafee keessatti mormiin homaa bu'aa hinqabaatuus jedhu.
''Tarii kan yaadamee nuy xabaan ala taasisuu waan tureef, akka akkasi hintaaneef nuti hojii kenya raawwaachu qabna jechuudha,'' jechuun himu.
Hoggantoonni paartilee lamaaniitu labsii filanniichaa keessaa akkasumas keeyyata hirmaannaa hojjattoonni motummaa filannoorratti qabaatan ilaalchisee bahees ni mormu.
Kana dura wayita haasofsiifneetti, hojjataan motummaa tokko filannoo keessatti ni hirmaata yoo ta'ee hojiisaa gadhiisa kan jedhuu labsicha keessatti hammatamusaa Pirofesar Mararaa 'kun baayyee qaaniidha'' jechuun ibsuun saanii ni yaadatama.
Mararaa Guddinaa: "Uummanni hatattamaan nama filateen buluu qaba"
Ityoophiyaan weerara Covid-19 'saffisaan babal'achaa jiru' ittisuuf labsii yeroo muddamaa labsite
Manguddoon Gujiitti ajjeefaman Waaccuu Nageessaa eenyu?
'Aniifi masiinqoon tiyya hawaasa baraaruuf hubannoo uumaa jirra'
Hanqinni kondomii mudachuu akka danda'u akeekkachiifame
Facebook appii jaalalleewwan qofti dhaamsa waliin dabarsan haaraa baase
'Adurree keessan manatti dhorkadhaa' jedhan hakimoonni fayyaa beeyladaa